Nayakhabar.com: बाबुरामको भ्रष्ट्राचारकाण्ड,के साँच्चै निर्दोष थिए त बाबुराम ?
बाबुरामको भ्रष्ट्राचारकाण्ड,के साँच्चै निर्दोष थिए त बाबुराम ?
केहि समयमात्रै एमाओवादी छाडेर नयाँ शक्ति अभियान निर्माणमा जुटेका एमाओवादीका पूर्व नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई यतिखेर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भष्ट्राचार काण्ड भन्दै भाषण गर्दै हिडेका छन् । तर ३० वर्षसम्म प्रचण्डको पुजा गदै हिडेका भट्टराई भ्रष्ट्राचार काण्डमा प्रचण्डको साक्षि बनेको उनी निकट नेताहरु नै बताउंछन् । तत्कालिन उपाध्यक्ष बाबुराम र प्रचण्डको रकममा कुरा नमिल्दा पार्टीनै फुटको संघारमा पुगेको बताइरहेका बेला उनले प्रचण्डले २७ अर्ब घोटला गरेको दावी गदै हिडेका छन् ।
यद्यपी माओवादी नेताहरुले नै डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुदा माओवादीभित्र सबैभन्दा बढि भष्ट्राचार भएको दावी गदै आएका छन् । अझ बाबुराम पत्नी हिसिला यामी दक्षिण एसियामैै भष्ट्राचारी भएको विभिन्न तथ्याङ्क समेत सार्वजनिक भएको छ । सत्तामा जानुअघि माओवादीमा खासै विवाद थिएन तर,सत्ताको स्वाद चाखेपछि एकपछि अर्को गर्दै माओवादी भित्रको आर्थीक घोटाला बाहिर आउन थालेको छ । पछिल्लो समय प्रचण्डप्रति आक्रामक वन्दै आएका र अहिले नयाँ शक्तिको अभियानमा लागेका डा बाबुराम भट्टराईका भष्ट्राचारकाण्ड पनि न्युजसेवाले फेला पारेको छ ।
हेरौ के के गरे आर्थीक पारदर्शीताको नारा लगाउने डा भट्टराईले । के प्रचण्डलाई गाली गर्दै हिडेका बाबुराम पुरै वेखबर थिए त सवै कुराहरुबाट रु यदि होइन भने त्यत्तीबेला किन हातमा दहि जमाएर बसे बाबुराम रु प्रचण्डले गरेको हरेक कार्यको आधा हिस्सेदार बाबुराम थिए कि थिएनन,जवाफ खोई रु डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै वेला पोखरामा क्षेत्रीय तहको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि परेका कबोलपत्रमध्ये माथि उल्लेख भएको अंक १३ अर्ब बढी कबोल गर्नेलाई दिन मिलाइएको तारतम्य सवैभन्दा चर्चीत विषय थियो । यसको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन् । सरकारको लागत अनुमान १४ अर्ब र सम्बन्धित ठेकेदारको कबोल २७ अर्ब रहेको अवस्थामा यो विमानस्थल निर्माणको काम गराउन रकम घटाघट वा बढाबढको वार्ता समेत सुरु भयो । यसैलाई व्यवस्थापन गर्न माओवादीले कर्मचारीको सरकारमा अरू सबै छाडेर पर्यटन मन्त्रालय आफ्नो हातमा लियो । जहा पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी पोष्टवहादुर वोगटीले पाए । आफुलाई दुधपानीले धोएको ठानेका बाबुराम र माओवादीका हर्कतहरु यतिमै सीमित भएनन् ।
–पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा प्राविधिक प्रस्ताव नै अयोग्य ठहरिएको चिनिया कम्पनीलाई लागतभन्दा १३ अर्ब बढी कबोल भएको ठेक्का स्वीकारेर ठेक्का दिनेलाई दिइयो जसमा कमीसनमात्रै ७ अर्ब थियो ,भलै त्यो एमाओवादीको खातामा किन नजाओस । यत्तिमात्रै होइन,दुई जहाज टेन्डर नै नगरी वार्ताद्वारा एयरबस नै भनी कम्पनी तोकेर पहिलेको ठेक्काभन्दा ७ अर्ब बढी करिब १४ अर्ब पर्नेगरी विमान खरिद गर्न नेवानिलाई निर्देशन दिएर ५ अर्ब रुपैया कुम्ल्याइयो,यसको जवाफ दिएन,माओवादी र तत्कालीन बाबुराम सरकारले ।
–लडाकु शिविरका नाममा निकासा भएको १९ अर्ब ७१ करोड, खर्च भएको १७ अर्ब २७ करोड बीचमा गायव पारिएको ९२ अर्ब ४४ करोड० कता विलायो ।
– शिविरमा लडाकुका तलबभत्ताबापत खर्च भएको ८ अर्ब ६५ करोड, पार्टीका नाममा लेबी जो प्रचण्ड आफैंले भनेको ३३ प्रतिशतको रकम ९२ अर्ब ८५ करोड०को हिसाबकिताब किन मागिएन त्यत्तीवेला ।
– चिनियाँ ४ वटा विमान वार्ताद्वारा सोझै खरिद गर्ने निर्णय गरेर ९१ अर्ब ५० करोड ।
– नक्कली लडाकुका नाममा कीर्ते हस्ताक्षर गरेर ६ वर्षसम्म निरन्तर भुक्तानी लिएर ९४ अर्ब ।
– अयोग्य भनी शिविरबाट निकालिएका लडाकुको नाममा ९१ अर्ब ।
– स्वेच्छिक अवकाश लिएका लडाकुलाई दिइएको रकम हेडक्वार्टरबाट खोसेर ९३ अर्ब ।
– द्वन्द्वमा मारिएका भनी ४६ सय नक्कली ९मृतक प्रतिव्यक्ति १० लाख० खडा गरेर ९५ अर्ब० । शिविरभित्र माओवादीका हातमा रहेका विभिन्न परियोजनामा अनियमितता भएको भनी शान्ति मन्त्रालयले ठहर गरेको ९३ अर्ब० ।
– प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्रममा सभासद् खरिद गर्न भनी चिनिया नागरिकबाट कृष्ण महराले दुई लटमा लिइएको ९१ अर्ब० ।
– त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता वृद्धिका नाममा राष्ट्रलाई १३ अर्ब घाटा, व्यक्तिलाई फाइदा ९३ अर्ब० । – स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट किर्ते विकास देखाई ९५ अर्ब० ।
– दुई सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट जडानका लागि बिनाटेन्डर ठेक्का दिएर ९५ अर्ब० । –युवा कोषबाट कार्यकर्तालाई अनियमितता विवरण गरिएको ९३ अर्ब० ।
– सिंहदरबारबाट बिनाटेन्डर सोलार जडान अनुमति दिएर ९६० करोड०।
– महानगरपालिका टावर निर्माणमा भ्रष्टाचार किटानी भएको ९१ अर्ब
– सेनाको हेलिकोप्टर खरिदमा उसले परल र मागेभन्दा बढी दिएर ९५० करोड ।
– लडाकु प्रमाणित नहुँदै ९ हजार बढीको संख्या देखाएर भत्ताबापत लिएको ९२० करोड
– लडाकुका नाममा राज्यकोषबाट रकम लिएर उनीहरूलाई नदिएको ९६८ करोड० ।
यसरी माओवादीको सेगेन म्यान भएर काम गरेका बाबुरामलाई के यो कुरा थहा भएन भन्नु कसरी सुहाउन सक्छ रु एमाओवादीका एकजना नेता भन्छन प्रचण्डले हरेक कुरा बाबुरामलाई सोधेर वा छलफल गरेरै गर्थे । के माओवादीको दोश्रो तहको नेता भएको कारणले बाबुरामले उन्मुक्ती पाउछन रु स्वयंम प्रधानमन्त्री भएको बेला उनले गरेका कयौ विषय र पत्नी हिसीलामाथी लागेका आरोपको विषयमा किन मुख खोल्दैनन बाबुराम रु अरुलाई औला सोझ्याउदा आफुतीर फर्किएका औलाको जवाफ कहिले देलान बाबुरामले,त्यो भने हेर्न बाकी छ ।